म प्राय: सबैलाई अनुकूलन गर्छु जब म पृष्ठ प्रकाशित गर्दछु। सामाजिक मा, म आकर्षक हुन सक्छ। खोजीमा, म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि म कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्दैछु। हेडि Onहरूमा, म निम्न सामग्रीहरूको स्पष्टता प्रदान गर्न चाहन्छु। र आन्तरिक, म सजिलैसँग मेरो पृष्ठ पाउन सक्षम हुन चाहन्छु जब म आफ्नो सामग्री प्रबन्धन प्रणाली खोज्दैछु। यस लेखको लागि, हामी तपाईंको अनुकूलनमा फोकस गर्नेछौं खोजी ईन्जिनहरूका लागि शीर्षक ट्याग.
शीर्षक ट्यागहरू, कुनै श doubt्का बिना, यो पृष्ठको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो जब यो तपाइँको खोज सर्तहरूको लागि तपाइँको सामग्रीलाई सही ढ index्गले अनुक्रमणिका गर्न आउँदछ। र जुन सबैको प्रेमको लागि एसईओ... कृपया तपाईंको गृह पृष्ठको शीर्षक अपडेट गर्नुहोस् घर। म प्रत्येक चोटि क्रिन्ज गर्दछु जब म साइट हेर्छु जहाँ उनीहरू गृह पृष्ठ शीर्षक अप्टिमेट गर्दैनन्! तपाई दस लाख अन्य पृष्ठहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ होम!
मापनको अन्त्यमा, म धेरै कम्पनिहरू प्याक गर्न को लागी देख्छु र उनीहरूको मा अनावश्यक वा व्यापक जानकारी को एक धेरै सामान भरिपूर्ण गर्न को लागी शीर्षक ट्यागहरू। धेरैले कम्पनीको नाम, उद्योग र पृष्ठ शीर्षक राख्छन्। यदि तपाइँ तपाइँको लागि राम्रो क्रममा हुनुहुन्छ ब्रान्ड कुञ्जी शब्दहरू, शीर्षकहरूले तपाइँको कम्पनीको नाम समावेश गर्न आवश्यक पर्दैन।
तपाईं ब्रान्ड सचेतना चाहिन्छ र राम्रो सामग्री छ। म यो अक्सर युवा ग्राहकहरूको प्रतिष्ठा निर्माणको साथ गर्दछु र तिनीहरूले केही उत्कृष्ट सामग्रीमा भारी लगानी गरेका छन्।
नबिर्सनुहोस् कि खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरूले अधिक खोज प्रश्नहरू लेख्न खोज ईन्जिनमा छन्।
सम्भव भएसम्म धेरै अक्षरहरूको प्रयोग गर्दा तपाई लजाउनु पर्दैन। पहिले अत्यधिक केन्द्रित कुञ्जीशब्दहरू प्रयोग गर्नु, त्यसपछि विस्तृत सर्तहरू पछिको, एउटा उत्तम अभ्यास हो।
यदि तपाईं WordPress मा हुनुहुन्छ भने, उपकरणहरू जस्तै रैंक मठ एसईओ प्लगइन तपाइँलाई तपाइँको पोष्ट शीर्षक र तपाइँको पृष्ठ शीर्षक दुबै अनुकूलित गर्न अनुमति दिनुहोस्। दुई फरक छन्। एक WordPress साइटको साथ, पोष्ट शीर्षक सामान्यतया पाठको मुख्य भाग भित्र हेडि tag ट्याग भित्र हुन्छ, जबकि तपाईंको पृष्ठ शीर्षक हो शीर्षक ट्याग जुन खोज इन्जिनहरूले कब्जा गरेको छ। WordPress SEO प्लगइन बिना, दुई समान हुन सक्छ। रैंक मठ तपाइँ दुबै लाई परिभाषित गर्न को लागी अनुमति दिन्छ ... तेसैले तपाइँ एक सम्मोहक शीर्षक र पृष्ठ को भित्र लामो शीर्षक को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ - तर अझै पनी उचित लम्बाई को लागी पेज शीर्षक ट्याग बाधा। र तपाइँ एक चरित्र गणना संग यसको पूर्वावलोकन देख्न सक्नुहुन्छ:
गुगल खोज को %०% अब मोबाइल को माध्यम बाट गरिन्छ रैंक मठ पनि एक मोबाइल पूर्वावलोकन (शीर्ष दायाँ मोबाइल बटन) प्रदान गर्दछ:
यदि तपाईंसँग प्लगइन छैन भने तपाईं सामाजिक मिडियाको लागि रिच स्निपेट्स अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ, शीर्षक ट्यागहरू प्राय: सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू द्वारा प्रदर्शित हुन्छ जब तपाईं लिंक साझा गर्नुहुन्छ।
प्रो सुझाव: तपाईंले आफ्नो पृष्ठ प्रकाशित गरेपछि, तपाईं कसरी एक हप्ताको साथ केही हप्तामा क्रमबद्ध गर्नुहुन्छ भनेर जाँच गर्नुहोस् Semrush। यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि तपाइँको पृष्ठ कुञ्जी शव्दहरूको फरक संयोजनको लागि राम्ररी रे ranking्कि is भइरहेको छ भने ... तपाइँको शीर्षक ट्यागलाई पुन: लेख्नुहोस् यसलाई नजिक मिलाउन (यदि यो प्रासंगिक हो भने अवश्य)। म यो सबै मेरो लेखहरूमा गर्दछु र म खोज कन्सोलमा क्लिक-थोरै दरहरू अझ बढता हेर्छु!
अस्वीकरण: म यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछु Semrush र रैंक मठ माथि।
HTML इमेल डिजाइनका चुनौतीहरू (र निराशाहरू) बुझ्दै
अक्टोबर 16, 2012 बिहान 9:34 बजे
शीर्षक ट्याग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेटा तत्व हो र एक श्रेणीकरण कारक हो। धेरै वेबसाइटहरूले कम्पनीको नाम मात्र प्रयोग गरेर यो ठाउँ बर्बाद गर्ने गल्ती गर्छन्। पृष्ठमा के छ भनेर वर्णन गर्न यसले कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।
उत्कृष्ट पोस्ट र विस्तृत... भविष्यमा, यसलाई शीर्षक अनुकूलनको बाइबलको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ! ताली..
म मेरो पृष्ठको शीर्षक पछि मेरो ब्लग शीर्षक जारी राख्न चाहन्न तर मलाई यो कसरी गर्ने थाहा छैन। म All In One Seo Pack प्लगइन प्रयोग गर्दैछु र मैले %blog_title% हटाएको थिएँ जुन %page_title% पछि थियो, हाल यो %page_title% हो। तर यो अझै जारी छ। header.php मा शीर्षक कोड छ, र page.php मा शीर्षक छ। मैले के गर्नु पर्छ, त्यसैले ब्लग शीर्षक पृष्ठ शीर्षक पछि जारी रहनेछैन।
म इमानदारीपूर्वक सबै इन वन एसईओ प्याक प्लगइनबाट तपाइँको सेटिङ्हरू निर्यात गर्नेछु र WordPress को लागी Yoast SEO प्लगइन स्थापना गर्नेछु। तपाइँ त्यहाँ सेटिङहरू आयात गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँसँग माथि के छ काम गर्नुपर्छ।